Iwaranti: 1.5 iminyaka
Imizi-mveliso Esebenzayo: Iivenkile Zokwakha
Emva kwenkonzo yewaranti: Inkxaso yobuchwephesha bevidiyo
Indawo yeNkonzo yaseKhaya: Canada, Germany, Viet Nam, Saudi Arabia, Russia, Malaysia, Australia, UAE
Indawo yokubonisa: Germany, Viet Nam, Saudi Arabia, Russia, South Korea, Malaysia
Ukuhlolwa kwevidiyo ephumayo: Kunikezelwe
Ingxelo yovavanyo loomatshini: Inikiwe
Uhlobo lweNtengiso: Imveliso eshushu ye2019
Iwaranti yezinto eziphambili: Unyaka o-1
Izinto ezingundoqo: Impompo
Inkonzo yasemva kwentengiso inikezelwe: Inkxaso kubuchwephesha bevidiyo, iziko lenkonzo yaphesheya elikhoyo
INDAWO YOKUTHENGA NGOKUQHELEKILEYO: Amandla okumba aphezulu
Uhlobo: okungangenwa Machine
Igama lebrand: OEM
Indlela yesicelo: Uxinzelelo oluphezulu
Ukusetyenziswa: Ukwaleka kwesakhiwo
Umsebenzi: Inaliti yentlaka
Igama elingundoqo: Polyurethane Foam Ukuzalisa Machine
Indawo yokuQala: Zhejiang, China
Ubungakanani bephakheji enye: 55X45X25 cm
Ubunzima obukhulu bomntu omnye: 9.000 kg
Uhlobo lwephakheji: ibhokisi
Ubungakanani (iiseti) 1 - 5000 > 5000
Est. Ixesha (iintsuku) 10 Kuya kuthethathethwana
1. Ukulinganisa i-9 KGS, ephathekayo, ekulula ukuyiphatha nokugcina, ubuninzi bokuphuma koxinzelelo ukuya kuthi ga kwi-70MPa.
2.Uxinzelelo lwe-Inaliti: 0-70Mpa (8000-10000Lb)
3. Iindlela ezi-1 zokutya ngaphakathi: galela
4. Ukusetyenziswa kwamandla: 560W / 220V
Isikhululo sikaloliwe, iTonela, iCulvert, uPhuculo lweSiseko, ukuHlaliswa koMhlaba, iDama, iProjeki yePort, iSlab ephezulu, ukutyhoboza, ukuDibanisa uKwakha, ukuNcipha kweScrinkage, iBala elingaphantsi kweenwele njl njl njl.
Qhuba 1 iseti 550W
Ingcinezelo High Hose 1 pc 5M
Ixabiso lokuvala 1 iseti
Ukulungisa iKhithi 1 iseti
Tywina Cwangcisa 1 iseti
Uhlobo lwe-Wrench 1 iseti
Irabha Pad Iifayile ezili-10
Hluza 1 pc
Indebe yezixhobo 1 iseti
I-Ningbo Zhuokang esindisa uQinisekiso loomatshini oomatshini Co., Ltd.
Ifunyanwa kwizibhulorho zeHangzhou Bay Bridge, eCixi, eNingbo Munici-pality, inkampani iyimizi-mveliso emibini. ZikwiDolophu yaseGuanhaiwei kunye neXinpu ngokulandelelana.
Inkampani yamisela ngo-2013, eyandulela indawo yayo eyonga uQinisekiso lweFektri yeFektri. Ukuqala ukusukela ngo-1991, umzi-mveliso waqala ukuvelisa oomatshini bempahla eyolukiweyo, imeko yomoya kunye neemoto njl. Uxinzelelo oluphezulu lokumisa iinaliti zokumisa amanzi, oomatshini abaphezulu bokugungxula kunye nezinto zokucoca i-polyurethane zaqala ukuveliswa kwaye zithengiswa ukusukela ngo-2006, ikakhulu ukumisa iinaliti. Yintengiso yonyaka ngo-2016 yayizizigidi ezili-118. Iimveliso zithengisiwe eRashiya, eMalaysia, eTurkey eHong Kong nakumaphondo asekhaya ezi-28 nakwizixeko. Yeyona mveliso inkulu yokumisa inaliti e-China kwaye ihlala kwisabelo esikhulu semarike.
I-Ningbo Zhuokang esindisa uQinisekiso loomatshini oomatshini, i-Ltd isekwe kakuhle kwisicwangciso seshishini sokunyaniseka, intsebenziswano enyanisekileyo, isibonelelo sokuxhasa kunye nophuhliso olulungelelanisiweyo. Kuzibophezele ekusekeni umgangatho wobunjani bolwazi kwaye unikezela umthengi ngenkonzo ekhawulezileyo neyanelisayo ngomgangatho wemveliso engcono.
Q1: njani umgangatho?
Sinikela ingqalelo enkulu kumgangatho wemveliso kwaye kugxilwe kumzi-mveliso ongaphezulu kweminyaka eli-10
Q2: Yintoni MOQ yakho?
I-MOQ yeemveliso ezahlukeneyo yahlukile. Ngokwesiqhelo ngamaqhekeza ayi-1000, kodwa ukuba sinezinye iiodolo kunye, iQTY encinci iya kufumaneka.
I-Q3: Zeziphi iindlela zokuhlawula ezikhoyo?
T / T, L / C, Paypal, kunye neNtshona Union.
I-Q4: Kuya kuthatha ixesha elingakanani ukwenza isampulu?
Iintsuku ezingama-3-5 ezixhomekeke kubunzima bokuyilwa kwayo.
I-Q5: Sifuna ukwenziwa ngokwezifiso, ngaba unokuvelisa?
Egqithileyo umbala obanzi PVC polyethylene nentlaka inwebu manzi ukwakha igadi kophahla, ibhulorho, railyway itonela, isibhakabhaka echibini
Okulandelayo: Uxinzelelo oluphezulu grouting DB epoxy Inaliti yokumpompa umatshini womatshini Polyurethane Foam Ukuzalisa
epoxy intlaka grouting Inaliti Packers ngentsimbi 13 ...
Impompo yenaliti yegreyithi yoxinzelelo oluphezulu ...
Ingcinezelo High Pvc Hose Pipe for Inaliti M ...
Brass umbala Inaliti Packers intsimbi 13 * 100mm A1 ...